Benza njani abaSebenzi ukuba baVumise ukuHlaziywa kweDatha ekuPhuculeni ukuSebenza | Martech Zone
Ukwehla kwexabiso kunye nokukhula kokuntsokotha kweendlela zohlalutyo lwedatha kuvumele nokuba ukuqala okutsha kunye amashishini amancinci ukonwabela izibonelelo zokuqonda okuphezulu kunye nokuqonda okuphuculweyo. Uhlalutyo lwedatha sisixhobo esinamandla esinokubanakho ukomeleza ukusebenza ngokukuko, ukuphucula ubudlelwane babathengi kunye nokuqinisekisa ukuba amashishini ayakwazi ukuchonga nokusombulula imiba enokubakho ngokukhululeka okukhulu. Ukufunda ngakumbi ngezixhobo zamva nje kunye neendlela zohlalutyo kuqinisekisa ukuba izixhobo kunye nezisombululo zamva nje kunqabile ukuba zingananzwa.
Ukuvavanya nokuphucula iinkqubo zokusebenza
Iindlela ezisebenzayo zokuvavanya kunye nokulinganisa imiba ephambili yokusebenza kunye nokuhamba komsebenzi kunokuvumela imibutho ukuba iphucule ngokumangalisayo ukusebenza kunye nokusebenza. Isoftware yohlalutyo lwedatha, iinkonzo kunye nezisombululo zinokunika ukuqonda okuphuculweyo kunye nokuqonda ngakumbi malunga nayo yonke imiba yemisebenzi yemihla ngemihla.
Ukubanakho ukuseta nokumisela iibhentshi ezifanelekileyo okanye ukuvavanya kunye nokuthelekisa utshintsho olunokubakho ngaphambi kokuphunyezwa kunokudala amathuba amaninzi okuphucula kunye nokucokisa. Ukusuka kuvavanyo olusezantsi ukuya kwiingxelo zexesha lokwenyani, ii-analytics zinokudlala indima ephambili ekuqinisekiseni ukuba ukusebenza ngokukuko kuyakwazi ukwenziwa ngcono.
Ukuphucula ubudlelwane babathengi
Ukuhlakulela isiseko esikhulu sabathengi okanye ukukwazi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi abakhoyo nabasezayo yimicimbi ekungekho shishini linakho ukuhlawula isaphulelo. Nazi iindlela ezininzi ukuba uhlalutyo lwedatha lunokusetyenziselwa ukuphucula ubudlelwane babathengi kunye nokunyusa ukoneliseka kwabaxumi. Ukusuka ekudaleni iiprofayili ezineenkcukacha kungasetyenziselwa ukulindela ngcono iimfuno zeentlobo ezahlukeneyo zabathengi kwisakhono sokuhlalutya ulwazi lweakhawunti yabathengi ukuze kufumaneke isiseko seendlela zokuziphatha, i-data analytics inokuba nokuninzi ekunikezelayo. Ukufumana ukuqonda okungcono kwabathengi babo kuqinisekisa ukuba amashishini aya kuba nakho ukukhulisa kunye nokugcina ubudlelwane obulungileyo obunokukhokelela kwimpumelelo yexesha elide.
Ukuchonga amathuba okuphucula
Ukunqongophala kokuqonda kuhlala kwenza ukuba kungabinakho ukufumanisa imiba esembindini kunye neemeko ezinokuba nomsele ekusebenzeni ngokubanzi. Uhlalutyo lwedatha lwenza kube lula ukugcina iso kwimiba eyahlukeneyo yokusebenza okanye ukuvavanya ukusebenza ngokukuko kunye nenqanaba lokusebenza ngexesha lokwenyani.
Ukuchonga nayiphi na imiba yokusebenza enokuthi ifune ukuhoywa okanye ukuphuculwa ngesantya esiphezulu, ubulula kunye nokuchaneka kuhlala kuyinkxalabo ekufuneka ibaluleke kakhulu. Amashishini anokuba enengxaki yemicimbi enokubakho kunye neenkxalabo eziye zakwazi ukuphuncuka kwisaziso zihlala zifumanisa ukuba ukuphucula ukusebenza okanye ukuphucula ukusebenza kunokuba ngumlo wokunyuka.
Sebenzisa ezona Zibonelelo zibalaseleyo
Ukusuka kwizicelo zesoftware ukuya kubanikezeli beenkonzo zomntu wesithathu, ukufuna izixhobo zamva nje kunye nokhetho olufanelekileyo lwezixhobo kwenza ukuba kube lula ukonwabela uluhlu olupheleleyo lwezibonelelo ezenziwe ukuba zibekhona uhlalutyo lwexesha kunye nexesha lokwenyani. Ukuwa kwamanqaku amaxabiso anxulumene neendlela zohlalutyo lwedatha kuthetha ukuba amashishini amancinci kunye nemibutho enemali encinci kuphela inokufumana kwaye ifumane izixhobo eziyifunayo.
Nokuba ifuna iinkonzo kunye noncedo lokuba umboneleli wohlalutyo lobungcali okanye inkampani inakho ukubonelela okanye ukusebenzisa usetyenziso lwedijithali ukukhanyisa iinkalo ezahlukeneyo zokhetho lwabo, amashishini aya kuba enza kakuhle ukufuna ezona zixhobo zibalaseleyo kunye nezisombululo.
Iindlela eziza kubakho kwiDatha eNkulu
Kukho kunye naliphi na inani le- ngoku nakwixesha elizayo iindlela eziza kuba bubulumko kumashishini ukugcina iso. Idatha enkulu ngokukhawuleza iba sisibonelelo esingabalulekanga, esinokuthi amashishini ambalwa akwazi ukufikelela ngaphandle. Iindlela zangoku zeshishini, ezinje ngendawo yokusebenza esizenzekelayo esinokubonelela ngedatha enkulu kunye nolwazi lokuhlalutya okanye izixhobo zesoftware ezenza kube lula ukuvelisa iingxelo okanye ukuvavanya iirekhodi zangaphambili, kuthetha ukuba amashishini anamhlanje anokulindela ukubona uninzi lohlalutyo lwedatha kwi iintsuku ezizayo. Ukugcina isantya kunye neetekhnoloji ezivelayo kunye nokwenza iinzame zokufunda ngakumbi ngazo naziphi na izixhobo kunye nezixhobo ezinokuthi zifumaneke kungekudala kungabonelela ngamashishini ngenzuzo yokwenyani kwimizamo yabo yokuphucula ukusebenza.
tags: Uhlalutyoukuphucula okuqhubekayoubudlelwane bamakhasimendeukusebenza kwesigqebaUhlalutyo lwexesha lokwenyanimanani